कथा, जुना क्रमश :2– Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
मामलाबाजेले घरमा रुद्री तथा ग्रह शान्तिको ठुलो पुजा छ भनेर निम्ता बाडें । जुनाको बिहे हो भन्ने गाउलेलाई केहि सुइँको थिएन । न त जुनालाइ नै थाहा थियो । दिनभरि पुजामा व्यस्त भए घर परिवार र गाउलेहरु, जुनाको ग्रह काटने पुजा भनेर नुहाइ धुवाइ गरि नयाँ कपडा लगाई दिएर जज्ञमा बसाले, सम्साझमा घोडामा चढेर पाच सात जना पाहुना आए। जुनाको बिहे भनेर बिना तडक भडक नगरीकन बिहे गरिदिनु पर्ने थियो । मामला बुढाको मनमा खुशी त थिएन । तर के गर्नु उनले बोलि सकेका थिए । ति पाहुनाहरुलाई स्वागत गरियो । बस्ने खाने सबै ब्यबस्था मिलाइयो । चक्रपाणीलाई जग्यमा ल्याएर जुनालाई सिन्दुर हाल्न पनी लगाइयो । जुनालाइ यो सब के भैरहेको छ । उनले केहि बुझ्न सकिकी थिइनन् ।
उनले त साथीहरुसंग गुडिया र गुडियासंग बिहे गराएर खेलेकी मात्रै थिइन् । आज त सानो भिनाजुको संगसँग जग्यमा बसेर पुजा गराएका छन् । बिहेमा दुलहा बनेर आएका हुन् कि बाहुन बनेर उनि दुविधामा थिइन् । सिन्दुर लगाइदिदा पुजा कै टिका लगाएको भन्ने लागेको थियो उनलाई । मध्ये रातमा पुजा सकेर सुत्न गएको भन्ने लागेको थियो, जूनालाई । बिहान त ति पाहुनालाइ खाजा खुवाएर तयार बनाइ सके पछि, आँगनमा डोली लिएर मान्छे आए । नयाँ कपडा लगाएर जुनालाई डोलीमा चढाए । अब भने जुनालाई असह्यै भयो । अब मलाइ के गर्ने हुन् । किन यसरि मलाइ बोकेर लैजान खोजेका छन् । उनि सकेको जोड जोडले डाको छोडेर रुन थालिन ।
जुनाको रुवाइ टाडा टाडासम्म सुनियो । जुनाकि आमा त रुदा रुदा बेहोसै भइन । मामला बाजेसंग रोइन, कराइन, छोरीको बिहे जस्तो कुरालाई मसंग समेत लुकाएर राख्ने ! झडकेला छोराहरु, राडो ससुरा, उमेरै नमिल्नेलाइ आफ्नै मान्छे हुन भनेर बिहे गरेर छोरीलाई जानी जानी भीरबाट खसाल्ने काम गर्नु भएको छ, हजुरले । हजुरलाई छोरीको सराप लाग्छ, भन्दै घर भित्र बाहिर गर्न थालिन । छोरीलाई बिदाइ गर्न पनी बाहिर आउन मानिनन ।
अन्तत: दुलहीलाई लिएर पाहुना जन्तीहरु फर्के । खुमाछोरी मामला बुढाकी भाइकि छोरी थिइन् । जिम्मालकी कान्छी दुलही, मामला बुढाले जुनालाई तिमीले ख्याल गर्नु है । दुलहा तिरको सबै परम्परा सकेर दुरान फर्काउन भोलि नै पठाई दिनु भनेर भनेर अह्राए । जुना डोलिमै रुदा रुदै निदाइन । जन्ती खैरेनी हुदै बडियार खोलाको तिर हुदै उकालो लाग्दछन । बडियार खोलाको गडगडाहकसंगै जुनाको रुवाइ मलिन भएर सुनिन छोडेको थियो । उनले खान पनी बिर्सेकी थिइन् । भोकले उनलाई जगायो । राति अबेर जुनालाई चक्रपानिले घरमा भित्र्याए । बैनी बाल्खै छ, भन्दै खुमा त्यस रात संगै जुनासंग देवरकै घरमा सुतिन । बिहान, भोलि बिहानै ग्रहशान्ति र ढोग भेट
दिदि खुमाकै सहयोगबाट सबै गराइयो, जुनालाई के कसो गर्न पर्ने हो केहि पत्तै थिएन र पत्तै भएन ।
ढुंगाले छाएको घर, बाहिरबाट हेर्दा तिन तला जस्तो देखिने । माथि तलामा अन्नपातको भण्डारण गर्न राखिएको थियो । बिचको तला जम्मा दुइ वटा कोठी थिए । काठको भर्यांग बिचमा भएकोले भर्यान्गको दाहिने देब्रे तर्फ कोठीका ढोका थिए । तल्लो तलामा भान्सा कोठा थियो, भान्छा कोठाको डिकमुनि ठुलो ओछ्यान अनि ओदाने चुलो बलिरहेको हुन्थ्यो । ठुलो ओछ्यानमा बसी आगो ताप्ने । दुध तताउने, चिया पकाउने गरिन्थ्यो । बर्षमा नौ महिना जस्तो जाडो हुने हुनाले यो ठाउ सबैको प्यारो नै थियो । त्यहि घरमा ओसारी हालेर दलान बनाइ एउटा खुला कोठा निकालिएको थियो ।
कोठामा एउटा काठको खाट र त्यसमाथि केहि कम्मल बिछ्याईएको थियो, बाकि रहेका ठाउमा गुन्द्री बिछ्याएर माथि काम्लो बिछ्याइएको थियो । आएका पाहुनालाइ बसाल्ने बैठककै रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । जिम्माल भक्तिरामले आफ्ना सात भाइ छोरा र छोरीहरुलाई यहि घरमा हुर्काएका थिए । आफु बुढो भए पछी आफ्नो जिम्माली पद, जेठो छोरा प्रेम भक्तलाइ दिन चाहेका थिए । तर प्रेम भक्तलाइ जिम्माली समाल्नेतिर कुनै चासो थिएन । उनि अलि रसिक थिए । उनि भजन गाउने गित संगीत तिर लगाव भएको मान्छे । जिम्माली जस्तो जिम्मेवारी पदको लागि उपयुक्त छैनन् भन्ने ठानेर नै जिम्माल भक्तिरामले आफ्नो माहिलो छोरा लक्ष्मीभक्तलाई जिम्माली अड्डामा गएर हस्तारण गरेका थिए । सबै भाइलाई छुट्याई दिएर आफु कान्छो छोरा चक्रपानीसंग बसेका थिए ।
तर दुर्भाग्य भक्तिरामकी पत्नी बितिन, केहि बर्ष नहुदै दुइ वटा नाति जन्माएर कान्छी बुहारी पनि बितिन । भात भान्छा गर्न सजिलो होस् भनी काहिला छोरा बुहारीलाई आफैसंग मिसाएर राखे । भक्तिराम ढल्केको उमेर संगै सरिर कम्जोर र स्याहार सुसार चाहिने भैसकेको थियो । आफुलाई माया गर्ने र आफुलाई स्याहार सुसार गर्ने बुहारी नै नभएपछि उनि मर्माहित हुन् पुग्नु स्वभाविकै थियो । ससाना नाति हुर्काउन पर्ने । हजुरबाउलाई पिरै थियो । कान्छो छोरा चक्रपाणिको बिहे गरेर मात्रै समाधान हुन्छ भनेर दोश्रो बिहेको लागी केटि खोज्न जिम्माल लक्ष्मीभक्तलाइ जिम्मा दिइएको थियो । बालबिबाहको चरम अबस्था थियो । बिस पचिस बर्षकी केटि पाउनु सम्भव थिएन। भाइ भने पैतिस बर्षको भैसकेको थियो । कि विधवा बिबाह गर्न पर्यो । बिधवा बिबाह गर्ने चलन पनि थिएन । कसैले विधवालाई स्याहारी हाले भने गाउलेले जातबाट खसाल्ने र डाँडो कटाइदिने चलनले गर्दा जिम्माल जस्तो मान्छेले आफ्नै भाइलाई त्यस्तो गर भन्न सकेनन । आफ्नै बाउलाई भात भान्छा गराउन पर्ने भएकोले गर्ने कुरै भएन । त्यहि कारणले गर्दा आफ्नै ससुरालीमा गएर सालीलाई मागेका थिए ।
जिम्मालले सालीलाई कुनै दुख हुन् दिन्न । झडकेला छोरा भए पनी म जिम्मा भए । केटि मान्छेको जात एक आध सन्तान जन्माए पछि बुढी भैहाल्छन, अलिकता उमेर त हो बढी भएको भन्दै बढो दुखले मनाएका थिए । जेठो ससुराले नाइँ भन्न सकेनन र सो बिहे भयो । घरमा नयाँ दुलही भित्र्याएपछि गाउका आफन्त मान्छे र स्वास्नी मान्छेहरु जमा भएका थिए । अगाडी केहि कसैले नभनेपनी “ हेर यस्ती बाल्खलाइ बिहे गरेका, छोरालाई बिहे गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि ? भनेर खाने खुशी गर्दै थिए । दुइटा छोराले आज हामो बाको बिहे भयो । आमा भन्न पर्छ रे ? यी त हामि जत्रै छिन त ! कसरी आमा भन्ने ? भन्दै हजुरबुबालाई सोध्न थाले । भक्तिराम नबोली चुपचाप बसिराखे ।
भर्खर दश बर्षमा टेकेकी जुनाले न त भात पकाउन सक्थिन । न उनले दैलो कुचो नै गरिकी थिइन् । नयाँ दुलहीको हातले पकाएको भान्छा गराउने दिन थियो । त्यस दिन, भातको कसौडी भान्छा कोठाबाट पल्टेर ठुलो ओछ्यान हुदै गुल्टिदै दलानमा आइपुग्यो । छडको परेको चामलसितको भात पोखिदै बाहिरसम्म आइपुगेको थियो । उता भित्र पट्टि भान्छामा जुना ड्वा ड्वा गरेर रुन थालिन । गाउका नातेदार बुहारीहरु गफ़्फ़िएर हाँसोको फोहरा छोडेका थिए ।
भक्तिरामलाई असाध्यै रिस उठ्यो । खाटबाट लौरो टेकि सकी नसकी उठेर खै कहाँ गयो, जिम्माल त्यसले यस्तो बाल्खलाइ बिहे गरेर ल्याएर यस्तो बिजोक गराउने, तुरुन्त यसलाई माइत पठाई दे । कान्छा आजै लगेर माइत छोडेर आउज । मैले यस्तो हत्ते देख्न सक्दिन । जबसम्म घर धान्ने हुन्ने तब सम्म यस घरमा ल्याउन पाउन्नस भन्दै हकारे !
जिम्माले बाबुको कुरामा नबोली टाउको निहुर्याएर हुन्छ भन्दै टाउको हल्लाए मात्रै ।